Ciidamo isku rasaaseeyay Jowhar & Qasaaro ka dhashay! | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Ciidamo isku rasaaseeyay Jowhar & Qasaaro ka dhashay!
Ciidamo isku rasaaseeyay Jowhar & Qasaaro ka dhashay!
Ciidamo ka wada tirsan Dowladda Federaaka Soomaaliya ayaa galabta isku rasaaseeyay Magaalada Jowhar ee caasimadda Maamulka Hirshabeelle, sida ay inoo xaqiijiyeen Masuuliyiinta Maamulka.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in israsaaseynta ay dhexmartay qaar ka tiran ilaalada Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Hirshabeelle Cali C/laahi Xuseen (Cali Guudlaawe) iyo Ciidamo Millitari ah oo hoostaga Guutada Labaad.
Iska hor imaadkan ayaa yimid kadib markii Ciidanka Millitariga Guutada Labaad Kontorool ay ku sugnaayeen ay soo mareen Ciidankan kale oo watay gaadiid dagaal, kadibna uu soo kala dhexgalay kala shaki sidaasina ay isku rasaaseeyeen.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan (Axmed Faal) ayaa markii dambe tagay goobta oo kala dhexgalay Ciidankan, waxaana xalinta khilaafkooda u xilsaaray saraakiil kale oo ka tirsan Millitariga.
Inta la xaqiijiyay Hal Askari ayaa ku geeryooday falkan dhacay, iyada oo ay ku dhaawacmeen laba kale, oo dhaawacooda loo soo qaaday Isbitaalada Magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen saraakiisha Hay’adaha ammaanka.
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Hirshabeelle Cali C/laahi Xuseen (Cali Guudlaawe) ayaanan ku sugneyn Magaalada Jowhar, wuxuuna howlo shaqo u joogaa Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Sideedii bishan ayay aheyd markii Ciidamo Millitari ah oo ku sii jeeday Garoonka Diyaaradaha iyo Ciidamo kale oo ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano (Bancraft) uu iska hor imaad ku dhexmaray Duleedka Magaalada Jowhar, waxaana ku geeryootay laba Askari, halka ay ku dhaawacmeen Afar kale.
Kala shakiga Ciidamada dhexdooda ee degaanada Hirshabeelle ayaa xoogeystay kadib markii xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab ay dharaar cad 5-tii bishan weerar khasaare geystay ku qaadeen Magaalada Balcad, oo ay mudo saacado ah la wareegeen xaafado ka mid ah degmada.